CUCUMBER "ELEGANT": SHARAXAADA KALA DUWAN IYO SAWIRRADA - BEER CAGAARAN
Kala duwanaanta qajaarka "Elegant": sifooyinka iyo sharaxaadda
Qajaarka waa la koray meel kasta, iyo sayidad waliba waxay leedahay faaiidada ugu weyn, oo sanad kasta ku yaal meel bannaan oo beerta ah. Badanaa mid ka mid ah "jecel" ee beerta taagan kala duwan qajaar "Elegant" - noocyo aad u caan ah oo la raadsado, oo koray tan iyo 1971, sidaa daraadeed qodobkan waxaan eegaynaa sifooyinka faahfaahsan iyo sharaxaad, waxaanu cadeyn doonaa haddii ay ka mid tahay noocyo kala duwan ama midab ah, oo muujinaya muuqaalada beeraha iyo daryeelka guriga.
Waxaa habboon in la ogaado in "Xajka" dhab ahaantii waa noocyo kala duwan oo aan lahayn wax la qabsiiyo Beelaha, inta badan oo fekeraya.
Caleemaha qajaarka waa dherer dhexdhexaad ah, awood u leh inay sameeyaan shan shan laamood, miraha waxay u muuqdaan bil gudaheed ama laba kaddib marka la beero, oo tilmaamaya noocyada kala duwan ee hore u bislaaday.
Ma taqaanaa? Qajaarka waxay ka timaadaa Himalayas, halkaas ilaa maanta waxay ku baxdaa duurka. Waxaa dhab ah la og yahay in qajaar, sida khudradda hoyga, waa in ka badan 6 kun oo sano.
Marka la tilmaamayo noocyada qajaarka ah "Xiisad" waa in la ogaadaa in midhaha ay leeyihiin qaab muuqaal ah oo gaaraya 150 g oo miisaankeedu yahay, dhererka, cagaarka ayaa kori kara celcelis ahaan 12 cm Caadi ahaan qurux badan, xitaa iyo qadarka qiyaasta isku mid ah. Waxyaallaha miraha leh waxay leeyihiin qallaf qosol leh, cufnaanta, la'aanta qadhaadh. Peel Zelentsov kala duwan ee yar yar ee kuuskuus yar oo leh cadcad yar oo cadcad.
Fiiri noocyada qajaarka ugu caansan: Siberian Festoon, Hector, Crispina, Taganay, Lukhovitsky, Colonel Real, Masha, tartan, Zozulya, Paltchik, Nezhinsky "iyo" Dareemo ".
Waxaa ka mid ah faa'iidooyinka kala duwan ee "Elegant" loo aqoonsan karo:
dhadhanka fiican ee Zelentsov;
caabbinta cudurrada iyo cayayaanka, oo aan soo gaadhsiin xaydhey;
awooda ah in uu noqdo pollinator noocyo kale oo qajaarka ah;
iska caabida heerkulka hoose;
cusub, qasacadaysan iyo cusbada, oo dhadhan fiican leh;
isbeddel degdeg ah oo loo sameeyo xaalado kala duwan oo cimilada.
Faa'iidada ugu weyn ee kala duwan ee noocaan ah waxaa loo tixgeliyaa in uu yahay mid culus oo qajaarka ah, kaas oo la arki karo marka cuno miro cusub.
Si qajaarka "qosolka leh" si fiican u dheehantahay, waxaa lagama maarmaan ah in la raaco talooyinka si loo xaqiijiyo xaaladaha sii kordhaya ee wanaagsan iyo talooyinka daryeelka xanaanada.
Dabcan, miraha "Qosolka" qajaarka koray ee lagu koriyo si dhakhso ah, laakiin si ay u fududeeyaan hawshooda, waxay ku talinayaan beerashada qajaar abuurka isla markiiba ee dhulka furan, iyada oo la bixiyay in ciidda kululeynin aan ka yarayn 15 darajo.
Waxyaabinta dhirta waa in lagu qooyay dhexdhexaadinta kobcinta koritaanka ka hor intaadan beeran. Beeridda abuurka waa in la sameeyaa si qoto dheer oo qiyaastii 2 cm ah.
Waxaa lagu talinayaa in lagu beero ciidda hore loo daweeyay, kaas oo la diyaariyey tan iyo xilliga dayrta. Hawlahani waxay lagama maarmaan u yihiin ciidda uu dabacsanaa oo bacrin ah, oo leh heer sare oo ah humus. Si ay ciidda u hesho sifooyinka noocan oo kale ah, waxaa lagama maarmaan ah in lagu daboolo arimaha bakeeriga ee ciidda la qodey si qoto dheer oo ah 15 cm xilliga dayrta. Ka hor inta guga, waxay burburin doonaa, dhalinaysaa kulaylka, iyo sidoo kale nafaqooyinka in ay ka qayb qaadan doonaan koritaanka degdeg ah iyo firfircoon ee geedo.
Ma taqaanaa? Buulashada, taas oo markii ugu horeysay ee taariikhda la dhisay si ay u koraan dhirta sanadka oo dhan, waxaa loogu talagalay qajaarka - khudradda caanka ah ee halyaygii hore ee Roomaanka Tiberius.
Ka hor inta geedo soo biqlo, waa in aad si joogto ah u waraabiyo ciidda sida ay u engegan. Ma noqon doonto mid aad u macquul ah in sidoo kale lagu hayo hoyga sariirta leh wax kasta oo daboolan si loo hayo kulaylka iyo qoyaanka.
Marka caleemaha ugu horeeya ay muuqdaan, waxaa lagama maarmaan ah in la dhiso taageerooyin sidaas daraadeed caleemaha qajaarka ayaa koraaya vertical. Nidaamkan noocan oo kale ahi waa lagama maarmaan si loo badbaadiyo booska oo u siiyaan dhirta qaabka caadiga ah ee duurka, iyo sidoo kale si loo fududeeyo daryeelka iyaga.
"Elegant" wuxuu jecel yahay waraabin joogto ah oo joogto ah. Muhiimad waa xaqiiqda ah in waraabinta waa in la sameeyaa biyo kulul marka loo eego biyaha qolka.
Biyo digaagga habeenkii. Ku dhowaad 1 jibbaaran. M waa in ay isticmaashaa 5 litir oo biyo ah.
Waa muhiim! Xilliga roobka iyo daruuraha, waa in la yareeyaa waraabinta.
Abuuritaanka baadiyaha - fure u ah goosashada wanaagsan
Si ay beergooyska u noqoto mid tayo sare leh, waxaa lagama maarmaan ah in la siiyo warshad leh qaab abuur ah oo ah baadiyaha. Xididdada dhaqanka waa daciif, si aysan si buuxda u siin karin waxyaabaha cagaaran leh walxaha dareeraha ah iyo daruuriga ah, taas oo ka xanaajin karta cirridkooda iyo lumista midabka. Si loo fududeeyo koritaanka caleemaha, waxaa lagama maarmaan ah in laga saaro qaar ka mid ah qaybahooda. Nidaamkan waxaa lagu fuliyaa marxaladda horumarinta hore.
Dhismaha xayawaanku wuxuu dhacaa marka la jiido. Si aad u sameyso qaabkan si sax ah, waxaa lagama maarmaan ah in lagu tiriyo xaashida saddexaad ee ciidda lagana saaro intiisa kale. Haddii dhaqanka la daciifiyo, hababka waa in la sameeyaa, iyagoo tirinaya xaashida lixaad. Ka dib markii la marsiiyo, baadiyaha waa inay ka kooban tahay ilaa 6 jeedal.
Ururinta caleemaha bislaaday waa in la sameeyaa maalin kasta. Tani waxay gacan ka geysaneysaa in ay dhaqaajiso koritaanka ugxansidaha iyo sameynta mid cusub.
Waxaa lagama maarmaan ah in la qaado qajaarka adoo jiidaya ama soo jiidaya miro ka baxsan badbaadinta, si looga hortago casiir ka soo cagaarka.
Midhaha ugu horreysa ee la sameeyay mugdi kasta waa in lagu riixaa dawlad la'aanta. Laguma talin inta lagu jiro xilliga jilitaanka si loogu oggolaado miraha in ay dib u soo baxaan.
Si loo helo "Qosol" noocyada kala duwan ee khajaarka si ay u kala soocaan wax-soosaarkooda sare, waxaa lagama maarmaan ah in ay si joogto ah u quudiyaan dhirta leh Bacriminta diyaarka u ah, taas oo beddesho qalalan, digaal ama digada digaaga.
Haddii qajaarka ku koraan meel nadiif ah, waa in ay si joogto ah loo siiyo qudaarta.
Waa shardi u ah horumarka caadiga ah ee duurka waa dabciga ciidda beerta.
Ha ilaawin ka hortagga cudurrada iyo cayayaanka iyo sameynta buufin joogto ah. Tusaale ahaan, si looga hortago horumarinta kalluunka budada ah ee dhirta, waxa lagu talinayaa in lagu daaweeyo Topaz sida ku cad tilmaamaha. Si looga hortago dhacdooyinka kalluunka rootka, waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo xalka ka hortagga iyadoo la raacayo tilmaamaha. Cudurrada kale iyo waxyeelada cayayaanka ma muujinayaan daaweynta prophylactic, waa in la macaamilaa calaamadaha koowaad ee dhacdooyinka.
Kuwa ugu muhiimsan ee loogu talagalay qajaarka waa: dhammaan noocyada kaabajka, bidix: (yaanyada, baradhada), dill, dhir, karootada, xididdo iyo xakameyn.
Heer sare: Talooyin Waxyaabeedka Dheeriga ah
Khajaarka cusub ayaa si dhakhso ah u lumin kara qoyaanka, hoos-u-dhaca iyo liidata oo la keydiyo, markaa marka ay wali yihiin kuwo cusub, waa in la shaqeeyaa. Waa la cusbayn karaa, la kariyaa ama qasacadaysan.
Inta lagu jiro pickles dhadhanka waxay ku xiran tahay sifooyinka jilicsan ee kala duwan, iyo sidoo kale diyaarinta saxda ah ee miraha ee pickling, weelka la doortay, iyo sidoo kale ilaalinta heerkulka kaydinta caadiga ah oo ku saabsan 18 digrii. Haddii heerkulka kaydinta uu ka hooseeyo 15 digrii, ka dibna bakteeriyada lactic acid ayaa horumarin doonta si aad u qoto dheer, taas oo hoos u dhigi doonta Bisaylka alaabta. Haddii heerkulka hawadu ka sarreeyo 22 digrii, ka dibna hannaanka halsano ayaa ku dhici doona xawaaraha iftiiminta, taas oo gacan ka geysan doonta sii deynta gaasaska, kuwaas oo ku xiran horumarinta firfircoon ee bakteeriya, taas oo ka sii dareysa tayada alaabta. Aad bay muhiim u tahay in aad isticmaasho dhir udgoon iyo milix ku filan si loo xakameeyo horumarinta bakteeriyada bakteeriyada iyo kuwa bakteeriyada, iyo sidoo kale jeermiska waxyeelada leh. Waxaa lagula talinayaa in la sameeyo habka qajaarka qashinka ee weelasha alwaax ama dhalada. Weelasha qoryaha waa in si fiican loo dhaqaa oo la googooyaa biyo karkaraya. Sidoo kale inta lagu jiro qaadashada guriga, weelasha noocan oo kale ah waa in lagu xoqay toon. Weelka dabka waxaa lagu talinayaa in si fiican lagu maydho biyo kulul. Si aad u qaadato qajaarka foosto, waa inaad ka iibsataa taan alwaax ah oo hayn doona wax aan ka badnayn 100 litir, sidoo kale waa lagama maarmaan in la sameeyo geedo adag.
Waa muhiim! Alaabta la dhamaystiray waxay noqon doontaa mid aad u adag haddii aad foosto ku jirto bac caag ah.
Si loo sameeyo habkan, ma aha qajaarka dhirta ka baxsan, kaas oo noqon doona qiyaastii 12 cm, waxay noqon doontaa mid ku habboon, sidoo kale waa inaad doorataa miraha tayo sare leh iyo mid caafimaad leh, oo aan ka badnayn maalin ka hor. Miraha la soo xulay ka hor inta aan la miirin waa in si fiican loo dhaqo oo lagu qooyay ilaa 7 saacadood biyo qabow si loo xiro saxarka.
Kalluunka waxa loo isticmaali karaa mid kasta, iyada oo ku xidhan doorka shakhsi ahaaneed. Waxaa lagama maarmaan ah in la dhigo qajaarka lakabyada, kuwaas oo lagu shubay oo dhir udgoon, ka dib markii wax kasta oo lagu shubay brine.
Marinut qajaarka adoo ku daraya acetic acid. Taasi waa, saamaynta daaweynta ee acids ayaa dhacaya. Farqiga u dhexeeya pickling iyo salting, halka ay astaamuhu u samaysan yihiin dabiici ah, waa ku darista acid ee habka macmalka ah. Xulo midhaha loo yaqaan pickling waa inay la mid noqotaa sida salting, oo kaliya qashin biyaha qabow waxay qaadataa 3 saacadood. Wixii pickling ah dooro weel dhalada ah oo ku saabsan 3 litir. Ka hor inta aan la saarin midhaha, weelku waa inuu si fiican u dhaqo oo caadka. Kalluunka waxaa loo isticmaalaa in la dhadhamiyo kuna tiirsanaado rabitaan shakhsiyeed.
Dhiroonka si adag u xidhaan weel quraarad ah, oo leh basbaas leh, ka dibna ku shub marinade. Waa suurtagal in la isticmaalo qajaarka ka dib 15 maalmood ka dib.
Geedi socodka ilaalinta aad u la mid ah marinating. Kaliya keli ah waa in ka dib qajaarka si fiican loo daboolay, brine waa la shubay, la kariyey, dareeraha ayaa lagu daray oo qajaarka ayaa mar kale ku shubay brine this oo la duubay dabool leh. Waa in aynaan ilaawin ku saabsan qashinka qashinka qasacadaysan, waa in lagu sameeyaa heerkul ah ilaa 90 digrii. Sidaa daraadeed, sii kordhaya qajaarka "Qosol badan" guriga waa mid sahlan, waxa ugu muhiimsan waa in la raaco talooyinka beerashada iyo daryeelidda dhirta, iyo sidoo kale in la ogaado khibradaha qaarkood ee ku saabsan sida loo kordhiyo wax soo saarka iyada oo la adeegsanayo manipulations fudud, kuwaas oo lagu sharraxay faahfaahin qoraalkan.